VLC bụ otu n'ime ndị kasị dị ike na ebudatara Media Player si n'ebe ahụ taa. Dị ka ọ bụ na-emeghe isi software, ọ dị maka free. N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ free software na awade mmachi ma ọ bụ ọ atụmatụ, VLC guzo na ya.
N'ọtụtụ ụzọ, ọ bụ nnọọ mma karịa adịchaghị media egwuregwu. Ọ na-akwado ọtụtụ ndị media faịlụ na formats na-anọgide na-emelite mgbe nile na-enwe ike na-egwu ihe niile. Bụ nke a mere na-esote ntọhapụ nke gị ọzọ VLC bụ mgbe ihe karịrị ọnwa ole na ole pụọ. Lee, anyị ga-ele anya na ise okenye na nsụgharị ndị VLC na Windows na Mac.
Part1: ise okenye na nsụgharị ndị VLC maka Windows
Part 2: ise okenye na nsụgharị ndị VLC on Mac
Part 1: ise okenye na nsụgharị ndị VLC maka Windows
Akụkụ: Ọ bụ akpa Weatherwax version nke nwere isi mmelite. Ọ na-ekwe na akpaaka-adiana nke videos e si ekwentị. Ọ na-abịa ọhụrụ malitegharịa atụmatụ ịnọgide site n'ókè ebe ị hapụrụ. Ọ nwere mma nkwado maka ọhụrụ HD codecs.
Akụkụ: Nke a ọhụrụ mbipute nke nwere ọhụrụ audio isi, ọdụ ụgbọ mmiri na mobile nyiwe, ngwaike nyopụta-ngbanwe na nkwado maka ihe formats. Ọ na-mma na ugbu a nsụgharị na-enye gị ọzọ-gen codecs nkwado.
Akụkụ: Ọ nwere ọtụtụ ihe ngwa ngwa multi-isi GPU na ndị ọzọ na ngwaike. Ọ na-enye nkwado maka ọkachamara formats, HD na 10-bit codecs. The Twoflower nwere ọhụrụ nsụgharị pipeline maka video na ọhụrụ nzacha welie videos.
Akụkụ: Nke a version na-aha ibu. Software e wepụtara wwith ọhụrụ GPU nyopụta on GNU / Linux na DSP nyopụta iji VAAPI na OpenMax IL karị. Ọ na-e wepụtara ọhụrụ Blu-Ray ndepụta okwu, MP4 lossless na VP8.
Akụkụ: Ọ bụ nke mbụ software nke mere VLC ewu ewu. N'agbanyeghị na ọ bụ na mbụ version, ọ na-akwado ọtụtụ ndị formats.
Ọ bụrụ na ị na-a Mac, ị nwere ike ibudata VLC kwa. Ebe a bụ ihe ị chọrọ ime.
Akụkụ: Ọ bụ isi version nke ugbu version 2.2.1. Ọ na-enye ọhụrụ atụmatụ dị ka akpaaka-bugharia n'ihi na Mac version, maliteghachi ebe ị hapụrụ na niile nsụgharị. Ọ na-akwado ọhụrụ HD codecs.
Akụkụ: Nke a version e mere na-enye mma nkwado maka àjà ihe ọṅụṅụ-HD video na ọhụrụ ngwaike nzuzo na ngbanwe. Ọ nwere mma arụmọrụ, na ngwaọrụ management nkwado. Ọ fixes na 1000 chinchi na ebe ke okenye nsụgharị.
Akụkụ: Ọ kpamkpam fixes Mac interfaces na Wen interfaces. Ọtụtụ ndị ọzọ interface nkwalite na-eme ka ọ dịkwuo mfe iji. Site na nke a version, VLC malitere enye nkwado si BluRay Discs.
Akụkụ: Ọ mma nkwado maka MKV, na 7.1 ọwa codecs. Nke a version ka ọhụrụ codecs dị ka BLU-ray ndepụta okwu, VP8 na MPEG-4 losseless. Nke a version agba HD videos ọtụtụ ihe ngwa ngwa.
Akụkụ: Nke a version e mepụtara maka PowerPC na OS dị ka Agu na agụ owuru. Ọ bụ multi format ọkpụkpọ na-akwado fọrọ nke nta niile nke formats nke oge na ọ bụ ihe na-ewu ewu. Ọ nwere mfe, isi ọrụ interface na n'usoro nke customization.
> Resource> VLC> ise Okenye Versions nke VLC